Spinner Keychain ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်စက်ရုံ - ZHAOQING CITY YUYA METAL PLASTIC PRODUCTS CO ။ , LTD
နေအိမ် > > သော့ကွင်း > Spinner သော့ချက်
ဒီဇိုင်း Off-set ပုံနှိပ်စတစ်ကာနှင့်အတူသွပ်အလွိုင်း spinner keychain
ပြုပြင်တာတွေ Split ring and chain
အရွယ်အစား အထူ 46mm H * 4.0mm
အရောင် ပျော့ပျောင်းသောကြွေ + off-set ပုံနှိပ်ခြင်း
နမူနာကြေး အခမဲ့နမူနာကိရိယာအစုံ။ နမူနာအခကြေးငွေသင့်ဒီဇိုင်း၏အခြေစိုက်စခန်းနှင့်တောင်းဆိုထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ။
နမူနာအချိန် ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာလက်ရာများအတည်ပြုပြီးနောက် 5-7 အလုပ်လုပ်ရက်
ကြာမြင့်ချိန် ဝယ်ယူအရေအတွက်မှဘာသာရပ်အတည်ပြုအတည်ပြုနမူနာပြီးနောက်7အလုပ်လုပ်ရက်။
တင်ပို့ UPS၊ DHL၊ TNT၊ FedEx၊ Air Cargo ï¼ŒSea Cargo စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရေနံချောင်း Freequote, လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထား, 5000pcs freemoldfeeupto
လျှောက်လွှာ မြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်များ / အမှတ်တရပစ္စည်းများ / ထိပ်သီးအစည်းအဝေး / ညီလာခံ / ဂိမ်းများ / အလှဆင် / မင်္ဂလာဆောင်လက်ဆောင်များ / မွေးနေ့လက်ဆောင်များစသည်တို့
ထုပ်ပိုး Poly အိတ် / ပူဖောင်းအိတ် / OPP အိတ် / ပလပ်စတစ်သေတ္တာ / လက်ဆောင်သေတ္တာစသည်တို့
ငွေပေးချေမှု T / T, Western Union ဘဏ်, L / C
အနုပညာလက်ရာများ CorelDraw၊ Illustrator၊ JPG၊ PDF၊
ပတ် ၀ န်းကျင်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း spinner keychain
စိတ်ကြိုက် spinner သော့ချိတ်၊ ပုံနှိပ်အရောင်များ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုန်ပစ္စည်းများ။
sandblasted နောက်ခံနှင့်အတူ Spinner သော့
စိတ်ကြိုက် spinner သော့ချိတ်ကိုဆုများ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ အလှဆင်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မင်းကိုမင်းရဲ့အနုပညာလက်ရာကိုသာပို့ပေးပါ။ ကြွင်းသောအရာအားဖြင့်၊ သင်၏စိတ်ကူးများကိုလှပသော spinner သော့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်
ဖိုက်နာနှင့်ကျောထောက်နောက်ခံကဒ်ထုပ်ပိုးမှုနှင့်အတူ Spinner သော့
1pc / opp အိတ်, 100pcs / poly အိတ်, 1000pcs / ctn
အသေးစားကှကျ: FedEx, UPS, DHL စသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာပို့သူများကတင်ပို့သည်။
အကြီးစားအမှာစာ: ပင်လယ်သို့မဟုတ်လေကြောင်းဖြင့်သင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကိုစီစဉ်ရန်ကြိုတင်ထုတ်ယူထားခြင်းရှိပါသလား။ သင်ပို့ဆောင်သူရှိလျှင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုကောင်းစွာစီစဉ်ပေးပါမည်။ မင်းအတွက်။
SC မှအပ်ငွေ ၅၀% အတည်ပြုပြီး၊ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် T / T နှင့် Western Union ကိုလက်ခံသည်။
Professional & ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူ
လျင်မြန်စွာပေးပို့အချိန်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Eco-friendly ပစ္စည်းများ
- နှစ် (၁၅) နှစ်သက်တမ်းရှိသောရေရှည်ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
- Professional Technical & QC Team: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်နှစ် (၂၀) ​​ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသူ
အခမဲ့ဒီဇိုင်း / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာ
ဘေးကင်းလုံခြုံ / ကျနော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခင်းရွေးချယ်ပါ
နမူနာ spinner သော့ချိတ်အကြောင်း
ကိရိယာတန်ဆာပလာအခကြေးငွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာလက်ရာများကိုအတည်ပြုပြီးမှ ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းအဆင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနမူနာများ၊ ကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကြိုတင်ပေးချေခြင်းသို့မဟုတ်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
၁။ Q: spinner keychain အပြင်အခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုလည်းထုတ်လုပ်နိူင်မည်နည်း။
တံဆိပ်၊ စိန်ခေါ်မှုအကြွေစေ့များ၊ ခါးပတ်ကြိုးများ၊ cufflinks၊ လည်စည်းညှပ်ပုလင်းဖောက်တံ၊ ငွေကလစ်၊ ကားအထိမ်းအမှတ်၊ ခွေးတံဆိပ်များ၊ bookmarks၊ သော့ချိတ်၊ လက်စွပ်၊
2. Q: သင်သည်ငါတို့မူရင်းနမူနာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အပေါ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား?
Kotar: ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကလုပ်ငန်းသည်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည်။
၃။ Q: ဘတ်ဂျက်နိမ့်သောကြောင့်အရည်အသွေးမြင့် spinner သော့ချိတ်ထားလိုပါကမည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်အကြံပြုသနည်း။
Kotar: ပျော့ပျောင်းသောကြွေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များပါ ၀ င်သည့်သံဓာတ်သည်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။ သွပ်အလွိုင်းပျော့ပျောင်းသောကြွေအားကြီးမားသောအရွယ်အစားတွင် 50mm ထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထူထဲသောအထူဟောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၃ မီလီမီတာတက်သည်
၄။ Q: ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုသင်လက်ခံပါသလဲ။
Kotar: Adobe Illustrator နှင့် PDF ဖိုင်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ PS, PNG နှင့် JPEG သည်အချို့သောအချိန်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၅။ မေး။ MOQ ဆိုတာဘာလဲ။
Kotar: MOQ သည်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလျှင် 50pcs ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဒီဇိုင်းနှင့်မဆိုသင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
Kotar: ယေဘုယျအားဖြင့်တော့တန်ပြန်နမူနာအတွက် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အလုပ်လုပ်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ၇ ရက်။ အချိန်သည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရေအတွက်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
7. Q: အာမခံကဘာလဲ?
Kotar: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဤနယ်ပယ်၌ရှိခဲ့ပြီးအရည်အသွေးသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် QC အဖွဲ့ရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနမူနာ၏ရုပ်ပုံများကိုတောင်းဆိုမှုကိုအောက်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
၉။ Q: ကျွန်ုပ်၏မှာကြားမှုအတွက်မည်ကဲ့သို့ပေးချေရမည်နည်း။
Kotar: Western Union နဲ့ T / T ကအဆင်ပြေပါတယ်။
၁၀။ မေး။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရနိုင်မလဲ။
Kotar: FedEx, DHL, UPS, TNT, AIR, SEA ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများလိုအပ်ချိန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်၏ဘတ်ဂျက်လိုအပ်သည်။
Hot Tags: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ ၀ ယ်၊ စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်စျေးပေါ၊ အနိမ့်စျေး, စျေး, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, ဖက်ရှင်, အရည်အသွေး, နောက်ဆုံးရောင်း, Fancy
3D ပုံနှိပ် Keychain